Malunga nathi -I-Chuangxinji Smart Card Co, Ltd.
Shenzhen Chuangxinji smart ikhadi co., Ltd.
CXJ Smart iqela Imbali.
Yasekwa ngonyaka ka-2001, i-Shenzhen Chuangxinji smart card co., Ltd yayijolise ekuveliseni ii-wristbands ze-RFID, amakhadi e-Smart kunye nee-tag ze-RFID njl. umgca wemveliso ekumgangatho ophezulu: umgca wemveliso yamakhadi e-PVC kunye nemveliso yenyanga nganye yamakhadi angama-30,000,000: oomatshini abatsha be-CTP kunye noomatshini bokushicilela be-Heidelberg, 8 oomatshini bokuxuba. Umgca wemveliso ye-antenna yeRFID ngemveliso yenyanga yamaqhekeza ayi-20, 000: ukuqengqa ukusonga oomatshini bokushicilela, ukuqinisa oomatshini, oomatshini bokhukuliseko lomhlaba nokukrola. Imveliso yemveliso yeRFID yemveliso eneemveliso ezingama-10,000,000 zekhadi kunye ne-30,000,000 ye-RFID tags: oomatshini abahlanganisiweyo abaguquliweyo, oomatshini bokukroba, Iqela lokuthengisa. Sinabasebenzi abangama-26 abathengayo abathetha isiNgesi, iJamani, iFrance, iSpanish, isiArabhu njalo njalo, Uluhlu lweshishini ukusuka eYurophu, eMelika, eOceania, eAfrika, eAsia nakumazwe asempuma mpuma nakwimimandla
Sinabasebenzi beentengiso aba-6 abathetha isiNgesi, iJamani, iFrance, iSpanish, isiArabhu njalo njalo, uluhlu lwethu lweshishini ukusuka eYurophu, eMelika, eOceania, eAfrika, eAsia nakwamanye amazwe asempuma nakwimimandla.
I-Shenzhen Chuangxinji Smart Card Co., Ltd yasekwa kwiminyaka eyi-2001, eyayikhethekile kwimveliso kunye nentengiso yamakhadi e-PVC, i-NFC wristband engadibani ne-infrared Thermometers kunye neemveliso ze-RFID njl.
Umgca wemveliso yamakhadi e-PVC kunye nokukhutshwa kwenyanga kwamakhadi ama-20,000,000 amakhadi: Oomatshini abatsha be-CTP kunye noomatshini bokushicilela be-Heidelberg, 8 oomatshini abaxubileyo.
Umgca wemveliso ye-Antenna kunye nokukhutshwa kwenyanga kwamakhadi ama-20,000,000 e-roll: ukuqengqa oomatshini bokushicilela, oomatshini abaxakekileyo, oomatshini bokhukuliseko kunye nokukrola.
Umgca wokuphela kwemveliso yemveliso yeRFID ngemveliso yenyanga nganye yamakhadi angama-500,000,000 kunye nee-tag ezingama-300,000,000 zeRFID: oomatshini abahlanganisiweyo abaguquliweyo bahlanganisa oomatshini abasikayo, oomatshini bokulaminetha.
Umsebenzi we-1.QC wokushicilela umsebenzi we-2.QC.
Umgangatho we-3.QC ngaphambi kwephakheji.
I-eriyali yoyilo- umhlwa we-eriyali ubungakanani-- I-Flip chip -I-RFID inlay lamination-- Die-cut rfid inlay okanye isitikha sobungakanani-
Inkqubo yokuprinta imveliso